Ewjim 1 uye 2 zviripo kurodha pasi pane GOG | Linux Vakapindwa muropa
Ewjim 1 uye 2 zviripo kurodha pasi paGOG
Handizivi kana paine mumwe wenyu amurangarira, asi ini Ndichiri kurangarira nguva iyoyo mandiri ini ndaive mushandisi weWindows uye ndakapedza mashoma masikati ndichiridza iyi inonakidza yechipiri 2D chikuva vhidhiyo mutambo. Ndichiri kurangarira kunetseka kwandaifanira kupfuudza akasiyana masikirini uye kuti imwe yeshamwari dzangu nevandaidzidza navo vakakwanisa sei kupasa mazinga ese zviri nyore… iyo inonzi mutevedzeri. Muchidimbu, iwo musoro unondiunzira ndangariro zhinji uye zvese zvinonakidza, ndiri kutaura nezve mutambo wevhidhiyo uyo protagonist yake iri honye yepasi Jim.
Ivo vakatoburitsa katuni akateedzana pamusoro pezviitiko zvehonye kana gonye iro raive nesutu rakasimba raimupa chimiro chemunhu uye masimba akasarudzika ekurwisa vavengi vakasiyana-siyana vaaisangana navo. Ini ndinorangarirawo kuti pakusiya mutambo zvisina basa, hunhu hwaizopenga nepfuti yake, uye ini ndinotorangarira mamwe emitsara kana kurira kwaakaita. Zvakanaka, kubva zvino zvichienda zvese izvo ndangariro zvinogona kushandurwa kuita maawa matsva ekunakidzwa nekuti GOG yakatoburitsakuna Ewjim 1 na2 muchitoro chake. iwo 1 Ndiwo mutambo wandakatamba ndichida kupfuura, uye nokutendeseka vhezheni yandaifarira zvakanyanya yaive 2. Zvisinei vakaburitsa yechitatu vhezheni inonzi 3D iyo mumaonero angu inotyisa, handina kuifarira zvachose. Ivo vakatora 3D kune ino yechitatu edition yeiyo yakasarudzika uye vakaiparadza zvachose, kana zvakadaro ndinofunga. Iyo 3D vhezheni inowanikwa muGOG, asi chete yeWindows. Kune rimwe divi, zita rekutanga kubva muna 1994 uye rechipiri kubva muna 1995 rinogona kuwanika zvakare kuLinux kubva pae € 8,49 chete, kunyangwe nekaviri unogona kutenga iyo yakazara pack ne3D.
Ini ndinonyatso kurumbidza, saka usamirire zvakare uye nemari iyoyo wega unogona kuzvifadza nemazuva ari kuuya uye nekurangarira nekushuvira nguva idzodzo nemitambo iyi inoita senge hadzimbofa dzakabuda musitaera kunyangwe vari nehunhu sei ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Ewjim 1 uye 2 zviripo kurodha pasi paGOG
Ini ndinoda mutambo uyu, ndichiri nawo mu backup.
Muchokwadi ndine imwe ingangoita yakafanana inonzi Pitfall, iyo yeanofarira musango.
Linux Mint 18.3 Sylvia yave kuwanikwa
MKVToolNix: chirongwa chekushandisa yako MKV vhidhiyo mafaera